Dhab iyo Dhalanteed!!! Qore Cabdullaahi Maxamed Cumar | Awdalmedia.com
Dhab iyo Dhalanteed!!! Qore Cabdullaahi Maxamed Cumar
Akhristayaal Salaan kaddib, waxan dhawaan akhriyey maqaal u qoray; mudane Cali Cabdi Coomey oo cinwaankiisu ahaa: " Beelaha Sacad Muuse iyo kursiga". Soona baxay, 30kii bisha Noofambar, 2017ka.
Marka aad dhuuxdid nuxurka maqaalkaasi iyo sida uu qoraagu u cabbirayba waa wax jira oo ku salaysan firkirka leexsan ee aynnu dhaqan ahaan qabatinnay - marka laga hadlayo dhinaca caadeysiga la qabatimay (de facto)! Waase arrin aan dhinaca qawaaniinta dalka u yaalla ku salaysnayn (De Juro) - loona baahan yahay in si degdeg ah looga guuro!!
Waa arrin dhaqan oo dhab ahaan u jira, in xisbi walba loogu abtiriyo; ninka markaasi ka madaxda ah reerkooda oo la yidhaahdo waa xisbigii reer hebel - marka uu xisbigaasi doorashada ku guuleystana, madaxweynaha doorashada ku guuleysta reerkooda loogu abtiriyo dawladda ee aan loogu abtirin xisbigii ay dawladdaasi ka soo baxday!
Waxa haddaba jawaab innooga baahan, dhawrankan su'aalood ee soo socda:
1.Madaxweynaha iyo madaxweyne-ku-xigeenka ma xisbi baa soo sharraxa mise reero/jilibo?
2.Madaxda dawladda ma reeraa soo doorta mise ummaddaa doorata?
3.Madaxda la soo doortaa, ma waxay u shaqeeyaan halkii ay ka isiraayeen (reerkoodii)? Mise hoggaaminta ummaddaa loo doortaa oo waliba loo dhaariyaa?
4.Reeraha ay madaxweynaha iyo madaxda kale ka soo jeedaan, maxay cayda iyo ceebta madaxda u xambaaranayaan haddii aanay dhib mooyiye aanay dheef ka helaynin xukuumadda? Ayaase ceebaynta jilibkaasi ama reeraynta madaxdaasi wada?
5.Maxay cayda iyo ceebta madaxdu leedahay ay u xambaaran waayeen xisbiyadii ay ka soo baxeen madaxdaasi - sida adduunka intiisa kalaba?
6.Muxuu madaxweynuhu reerkooda uga qadinayaa: jagooyinka sare ee dalka, madaxda hay'adaha, mashaariicda hor-u-marinta iyo wixii la mid ah - isaga oo u hoggaansan dhaqankaasi leexsan ee bulshadu caadeysatay ee caddaaladda ka fog?
Madaxweynaha la doortay ee mudane Muuse Xuseen (Biixi) Cabdi, haddii uu u habrado dhaqan xumadaasi la caadeystey oo uu dadka qaarkood xilalka dalka kaga qadiyo ama qaadaba; isaga oo ka baqaya ceebayn iyo cambaarayn kaga timaadda bulshada kale, waxay xaaladda dalku ku arooraysaa, hal-ku-dheggii ahaa, " Jugjug dheh oo meeshaada joog!"
Taasi macnaheedu ma aha, madaxweynuhu ha ku taxo darajooyinka reerkooda iyo intii u codaysay ee waa in uu xilalka waddanku u magacaabo ciddii hanan karta ee leh: aqoon, karti, waayo'aragnimo, daacadnimo iyo ammaano!!
Haddaba, haddii uu madaxweynuhu yeelan waayo; ku dhac uu ku soo xusho xukuumaddiisa ama uu xilka kaga qaado cida uu saluugo ee ka soo bixi weyda shaqada loo diro, waxa su'aali ka iman doontaa go'aan qaadashadiisa, kartidiisa iyo caddaaladiisaba!
Waxanan madaxweyne Muuse Biixi kula talin lahaa, in aan xukuumaddiisa ku xulanin: tolnimo, xididnimo, xigaal, qurbajoognimo, qolqoljoognimo, lab iyo dheddignimo, reer hebel baa dudi iyo degdegleyn ee uu ku xusho tilmaamaha aynnu korka ku soo taxnay.
Haddii aanu madaxweynu sidaasi yeelinna, caddaaladi inta cirku innoo jiro ayay innoo jirtaa oo waxa aynnu u qoollannaha; " Wallee reer aan ogaa ma guuro!"
A'dii kale waxan lahaa
Ilaah baa laga baqaa
Agoon waa tudhaa
Ammanaa la xifdiyaa
Ninkii arrin loo diree
Ummaddu soo doorataba
Ilaah waa eegayaa
aqoonlaawe uu wadoo
Iblays uu dabasocdaa
Albaabkii soo tumee
Maxaad Muusoow ku odhan???
A'dii kale waxan lahaa.........